Madaxii Barnaamijka Nukliyeerka Iiraan oo lagu dhex khaarajiyey caasimadda Tehraan | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Madaxii Barnaamijka Nukliyeerka Iiraan oo lagu dhex khaarajiyey caasimadda Tehraan
Mohsen Fakhrizadeh, maskaxdii ka dambeysey barnaamijka nukliyeerka Iiraan ayaa lagu khaarajiyey bariga magaalda Tehraan ee caasimadda Iiraan, sida ay goor dhow xaqiijisay Wasaaradda Gaashaandhigga dalkaasi.
Saynisyahankan ayaa lagu khaarajiyey bariga Damavand, halkaasoo ay Iiraan sheegtay ”in ay argagixiso ku xabadaysey gaariga Fakhrizadeh, oo isaga oo dhaawac ah isbitaal loola cararay kahor intii aanu halkaa ku dhimanin.
Wasiirka Arimaha Dibada Iiraan Javad Zarif ayaa falkan ku tilmaamay mid “argagixiso”.
“Waxaannu u garaaci doonnaa sidii biriq dadka diley shahiidkan oo aannu ka shallaaysiin doonno falkooda.” ayuu soo tweet gareeyey Hossein Dehghan, oo ah la Taliyaha dhanka ciidamada ee Ali Khamenei.
Dilka saynisyahankan oo ahaa wejiga Hay’adda Tamarta Nukliyeerka dalkaasi ayaa kusoo beegmaya jeer la hadal hayo in Madaxweyne Donald Trump uu weerar kusoo qaado dalkaasi maalmaha yar ee ka haray muddo xileedkiisa oo ku eg 20-ka Jannaayo.